आफ्नै बिहेको कार्ड बाँड्दै हिडेकि बेहुलीलाई टिपरले कुल्चेपछि… महेन्द्रनगर तनावग्रस्त! – PathivaraOnline
Home > अपराध > आफ्नै बिहेको कार्ड बाँड्दै हिडेकि बेहुलीलाई टिपरले कुल्चेपछि… महेन्द्रनगर तनावग्रस्त!
admin January 24, 2020 January 24, 2020 अपराध, समाज	0
धनगढी । बिहिवार सुदुरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा आफ्नै विवाहको कार्ड वितरण गर्दै हिडेकी बेहुलीलाई टिपरले कुल्चेर मा’रेको छ । यही माघ १३ गते हुने विवाहको भव्य तयारी भइरहेको थियो । बिहे जस्तो कुरो सबैतिर पुग्नुपर्ने, काम र तयारी भ्याउनु पर्ने चटारो त हुने नै भयो । साथीहरुलाई कार्ड वितरण गर्दै हिडेकी चार दिनपछिकी बेहुलीलाई टिपरले कुल्चेर ह’त्या गरेको हो । टिपर अब विकास वा सवारी साधन रहेन । मानिसको प्राण पखेरु टपक्कै टिप्ने महाका’ल बन्न पुगेको छ ।
बिहिवार अपरान्ह महेन्द्रनगरको बसपार्क नजिक रहेको चम्मन चौकमा से१क ८८७ नम्वरको टिपरले ठक्कर दिँदा भीमदत्त नगरपालिका–१८ गोबरियामा डेरा गरि बस्दै आएकी २० वर्षीय रमिता भट्टको मृ’त्यु भएको छ । विभत्स दु’र्घटनामा बेहलीको शरीर सडकमा टुक्राटुक्रा भएर छरिएको छ । मृ’तक युवती जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगरमा बि.एड तेस्रो वर्षकी छात्रा हुन् ।
रमिता यही माघ १३ गते हुने विवाहको कार्ड वितरण गर्दै हिडेकी थिईन् । साइकलमा सवार रमितालाई अत्याधिक गतिमा रहेको टिपरले ठक्कर दिदा उनको घटनास्थलमै मृ’त्यु भएको हो । दशरथ चन्द नगरपालिका–१ गुरुखोला घर भएर पढाईका शिलशिलामा महेन्द्रनगर बस्दै आएकी रमिताको प्राण पखेरु टिप्पर चालक जयराज पनेरुले उडाई दिएको आरोप लगाउँदै स्थानीयबासीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले चालकको लापर्बाहीका कारण दु’र्घटना भएको हो ।
आफ्नै विवाहको कार्ड वितरण गरी डेरामा फर्कने क्रममा टिप्परले ठक्कर दिएर बेहुलीको मृ’त्यु भएपछि विहेको तयारीमा जुटेका आफन्त शो’कमा डुबेका छन् । बेहुलीको मृ’त्यु भएपछि आक्रोसित स्थानीयबासीको विरोधका कारण बिहिवार साँझ महेन्द्रनगर त’नावग्र’स्त बन्न पुगेको छ । स्थानीयबासीले बेहुलीको ह’त्या गरेको आरोप लगाउँदै चालकमाथि ज्यान मुद्दा लगाउन माग गरेका छन् । सो टिपर जोशी बिल्डर्स एण्ड कन्ट्रक्सनको भएको खुलेको छ ।
कहाँ भेटियलाबाट कोहिनुर बनेकि स्वेता श्रीकृष्णसँग छुटिएपछि पुनः विवाह बारे यसो भन्छिन.. हेर्नुहाेस्